ဘွဲ့ရခဲ့တာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုက်ကားသမားကြောင့်ပါလို့ မရှက်မရွံ့ ဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး - CeleLove
ဘွဲ့ရခဲ့တာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုက်ကားသမားကြောင့်ပါလို့ မရှက်မရွံ့ ဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
October 12, 2019 Cele Love နိုင်ငံတကာသတင်း 0
ဘွဲ့ရခဲ့တာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုက်ကားသမားကြောင့်ပါလို့ မရှက်မရွံ့ ဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
ပညာသာ အမှန်တစ်ကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာက အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကို Sandra Estefani Ramos က သက်သေပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်မွေးဖွာလာဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော် … ။.
စာရင်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူများတွေ အများစုဟာ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီး ကိုယ့်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ကိုယ်တိုင်လမ်းဖောက်ကြပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
အဲဒီထဲကမှ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူလေးဟာ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာနည်းပညာသိပ္ပံကျောင်းကနေ ဘွဲ့ရရှိထားပါတယ် … ။ သူမရဲ့ကျောင်းစရိတ်နဲ့ ဘွဲ့ရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့နေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးက သူမရဲ့ ဖခင်ဆိုက္ကားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ် … ။
ဖခင်ဆင်းရဲတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ဖခင်ရဲ့ ဆိုက္ကားခကနေ ရဲတဲ့ငွေနဲ့ ခုလို ဘွဲ့ရအောင်တက်ခဲ့ရတာလို့လည်း သူမက ပြောပါတယ် … ။ လူချမ်းသာတာ ဆင်းရဲ့တာထက် စိတ်ဓာတ်ချမ်းသာဖို့က ပိုပြီးအရေကြီးပါတယ်…. ကိုယ့်မိဘဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်နေပါစေ..
ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ သူမရဲ့လုပ်ရပ်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းချီးကျူးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
Writer – SHN (Shwe Yaung Lan)
Source Ref : ABS-CBN News
ဘှဲ့ရခဲ့တာ ဖခငျဖွဈသူ ဆိုကျကားသမားကွောငျ့ပါလို့ မရှကျမရှံ့ ဂုဏျယူစှာပွောဆိုခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး
ပညာသာ အမှနျတဈကယျလိုခငျြတယျဆိုရငျ ခမျြးသာတာ ဆငျးရဲတာက အရေးမကွီးဘူးဆိုတာကို Sandra Estefani Ramos က သကျသပွေခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ … ။ ခမျြးသာတဲ့လူတဈယောကျအဖွဈမှေးဖှာလာဖို့ဆိုတာ လူတိုငျးမဖွဈနိုငျပါဘူးနျော … ။.
စာရငျးမြားအရ ကမ်ဘာပျေါမှာကွီးပွငျးလာတဲ့သူမြားတှေ အမြားစုဟာ ဆငျးရဲတဲ့သူတှဖွေဈကွပွီး ကိုယျ့ဘဝရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျ ကိုယျတိုငျလမျးဖောကျကွပါတာပဲဖွဈပါတယျ … ။
အဲဒီထဲကမှ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသူလေးဟာ ဆငျးရဲတဲ့မိသားစုကနေ ပေါကျဖှားလာခဲ့ပွီး လကျရှိမှာနညျးပညာသိပ်ပံကြောငျးကနေ ဘှဲ့ရရှိထားပါတယျ … ။ သူမရဲ့ကြောငျးစရိတျနဲ့ ဘှဲ့ရအောငျကွိုးစားခဲ့တဲ့နရောမှာ အရေးအကွီးဆုံးက သူမရဲ့ ဖခငျဆိုက်ကားသမားဖွဈတယျဆိုတာ ထုတျဖျောပွောခဲ့ပါတယျ … ။
ဖခငျဆငျးရဲတာဟာ ရှကျစရာမဟုတျတဲ့အကွောငျးနဲ့ ဖခငျရဲ့ ဆိုက်ကားခကနေ ရဲတဲ့ငှနေဲ့ ခုလို ဘှဲ့ရအောငျတကျခဲ့ရတာလို့လညျး သူမက ပွောပါတယျ … ။ လူခမျြးသာတာ ဆငျးရဲ့တာထကျ စိတျဓာတျခမျြးသာဖို့က ပိုပွီးအရကွေီးပါတယျ…. ကိုယျ့မိဘဟာ ဘယျလိုအခွအေနပေဲရောကျနပေါစေ..
ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားစှာ ထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ သူမရဲ့လုပျရပျကိုကမ်ဘာတဈဝှမျးခြီးကြူးနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ … ။
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ စီစဉ်ထုတ်လွှင့်ပုံကို မေးခွန်ထုတ်လိုက်ပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါကို သွားမပြိုင်ကြဖို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် သီရိဝင်းလှိုင်
အပြင်ပန်းမာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ်အရမ်း နူးညံ့တဲ့ A သွေးလေးတွေအကြောင်း
Copyright © 2020 | Developed by CeleLove